Wasiirro ka tirsan Koofur Galbeed oo difaacay ciidanka la geeyey Baydhaba – Kalfadhi
Kadib markii Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya (BFS), oo uu ka mid yahay Guddoomiyaha Golaha Shacabka, ay ka hor yimaadeen ciidan ay maanta Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) geysay Baydhaba, ayaa Wasiirka Amniga Koofur Galbeed, Xasan Xuseen, waxa uu sheegay in DFS ay arrintaas ugu talogashay adkeynta ammaanka gobolkaas, gaar ahaan magaalada Baydhaba.
Sida ay SONNA daabacday, waxa uu Mudane Xasan Xuseen ku difaacay DFS in ciidanka ay geysay Baydhabo ay, doorashada kusoo fool leh Koofur Galbeed darteed, sugi doonaan nabadda Baydhaba. “Ciidanka la keenay waxa ay u yimaadeen sugidda amniga” ayuu yiri Wasiir Xasan. Waxa uu sheegay in, maadaama ay Koofur Galbeed ka mid tahay Dowladaha Xubnaha ka ah Federaalka, ay ciidaankaas la geeyey ka shaqeyn doonaan ammaanka oo kaliya.
SONNA waxay kaloo sheegtay in Wasiirka Warfaafinta Koofur Galbeed, Ugaas Xasan Cabdi Maxamed, uu u sheegay Warbaahinta Dowladda in ciidanka ay dowladdu geysay Baydhaba ay ka caawinayaan Ciidanka Koofur Galbeed sugidda amniga iyo la dagaalanka Al-shabaab, waxa uuna warkaas sii xoojinayaa hadalkii Wasiirka Amniga Koofur Galbeed.
Warkaan waxa uu gaashaanka ku dhufanayaa kii ay ku cabanayeen Xildhibaanada BFS, oo ay saacado is xig-xigay uga muujiyeen walaac maanta ciidankaas la geeyey Baydhaba. Waxay sheegeen in aysan Baydhaba hadda u baahneyn ciidan, oo ay kuwii horay u joogay ku fillan yihiin ammaanka. Sida ay qaarkood ku doodayaan, waxay rumeysan yihiin in ciidankaas loo geeyey Baydhaba si ay u difaacaan Musharaxiin ay DFS la dooneyso Xilka Madaxweyna Koofur Galbeed.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo baaraya sababta kala dirista Guddiga Maaliyadda